Mashandisiro Aungaita Iyo Mutengi Chinangwa Dhata Unogona Kuwedzeredza Yako Yekutengesa Strategic muna 2019 | Martech Zone
Chishanu, February 1, 2019 Svondo, Kukadzi 3, 2019 Jilian Woods
Zvinoita kunge zvisingaite kuti, ne2019, mamwe makambani haasi kushandisa dham data kutyaira kwavo kwekutengesa uye kushambadzira matanho. Icho chokwadi chekuti vashoma vanombochera zvakadzika kuti vaone zvakanakisa zvinotungamira zvinokuisa iwe nekambani yako pane mukana wakasarudzika.
Nhasi, tinoda kutarisa zvinoverengeka zvezvinhu zve dham data uye zvazvinogona kuitira ramangwana rekutengesa nekutengesa nzira. Tichave tichiongorora zvese zvinotevera:
Chii Chinangwa dhata uye kuti inoitwa sei
Anoshanda sei data data
Kugadziriswa uye kubatana pakati pekutengesa nekutengesa
Chii Chinangwa Dhata?
Chinyorwa chinyorwa: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data
Mune akareruka mazwi, data rekuda rinoratidza kana tarisiro chaiyo iri kuratidza maitiro epamhepo anoratidza chinangwa chekutenga. Inotaura nenzira mbiri dzakasiyana: data remukati nedata rekunze
Mienzaniso miviri yakajairika yemukati chinangwa data iri
Yako webhusaiti fomu rekutaurirana: Iye munhu ari kutaura ari kutaura nechinangwa nekuda kuziva zvakawanda nezvekambani, masevhisi ayo, nezvimwe.
Yemunharaunda vatengi data: Dhata rakaunganidzwa kuburikidza nezve vatengi vemuno kuburikidza neCRM kana mamwe mapuratifomu ekushambadzira akakosha kwazvo kana uchiedza kunzwisisa chinangwa. Iyo data inoshandiswa nezvikwata zvekushambadzira kutarisisa kutungamira kune avo vari kufamba padhuze nekuita sarudzo yekutenga.
Yekunze chinangwa data inounganidzwa kuburikidza neyechitatu-bato vanopa uye inoshandisa hombe dhata kuumbiridza ruzivo rwakajeka. Iyo inounganidzwa kuburikidza yakagovaniswa makuki uye inochengeterwa padanho reIP. Iyi data chibereko chemamirioni ekushanyira kune mamwe mapeji pamazana ezviuru zvewebhusaiti.
Rudzi urwu rwe data runopa ruzivo rwakananga, rwakajeka pane ingangoita isingagumi mametric. Iyi ingori mienzaniso mishoma:
Huwandu hwenguva iyo yakatarwa gwaro, faira, kana dhijitari aseti inotorwa
Iyo nhamba yenguva vhidhiyo inoonekwa
Vangani vanhu vakapururudza kuburikidza mushure mekuverenga kufona kuti zviitwe pane peji rekumhara
Keyword yekutsvaga manhamba
Chii Chinangwa Dhata Inotsigirwa?
Chinyorwa chinyorwa: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/
Chinangwa data chakarongedzwa nevatengesi vanotora data kubva kuB2B mawebhusaiti uye vaparidzi vemukati, vese vari chikamu che data-kugovana co-op. Chokwadi, zano rekuziva kuti ndeapi masosi anoshanyirwa nemunhu chaiye, mazwi avanotsvaga, uye mabhureki avanobata nawo angaite senge ane huso kumeso kwake, asi hazvisi izvo. Iyo data inounganidzwa uye inochengeterwa chinangwa ichi, ndokuzogovaniswa ne (kana kutengeswa kune) vekutengesa uye vezvekutengesa. Kambani yekunyora, semuenzaniso, inogona kutora kufarira kumakambani (kana, mune dzimwe nguva, vanhu) vanopinda mazwi ekutsvaga se "rondedzero yekunyora masevhisi"Kana" munyori wedzidzo "mumainjini makuru ekutsvaga uye vanoshanyirawo masaiti anotengesa aya masevhisi aine chinangwa chekutenga.
Dhata inonyorwa uye inoshumwa vhiki nevhiki mune yakawanda yakawanda kesi. Kuburikidza nekuunganidzwa kwemamirioni chaiwo ekutsvaga, kushanyira saiti, kurodha pasi, kudzvanya-kuburikidza, kutendeuka, uye kuita, vatengesi vanogona kufananidzira zvemukati zvekushandisa uye kuona ma surges.
Iyi vhidhiyo kubva Bombora iyo inotsanangura maitiro acho zvakanaka:
Chinangwa Dhata Chinoshanda Sei?
Chinyorwa chinyorwa: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/
Mamirioni avanhu kutenderera pasirese vanoshandisa iyo Internet kutsvaga pamamiriyoni eenyaya uye nemaune batana nezvakanaka zvemukati zvemukati. Iwe unosarudza kuti ndezvipi zvakakosha zvakanyanya uye wotanga kuongorora chaiwo maratidziro anoenderana nematanho akasarudzwa. Mushambadzi anopa zvese zvemukati Intel zvinosanganisira, asi zvisina kuganhurirwa ku:
Mazita emaJobho etarisiro yakanaka
Saizi yekambani nenzvimbo
Mazita uye ma URL emaakaundi evatengi aripo
Mazita uye ma URL emaakaunzi akanangwa
Mazita uye ma URL evanokwikwidza vakananga
Ma URL emaindasitiri anokurudzira uye zviitiko
Zvemagariro zvinobata zveindasitiri zvinokurudzira uye vatungamiriri vekufunga
Zviri nyore uye zvakaoma mazwi ekutsvaga ane chekuita nezvigadzirwa, masevhisi, matambudziko / marwadzo poindi, uye zvinogoneka / zvaunoda mhedzisiro
Zvese zviri pamusoro zvakavakirwa mumatanho anocherekedza uye anocherekedza zviito zvakakosha (izvo zvinoratidza kusangana kwakasarudzika pakati pemamiriyoni ekutsvaga uye zviitiko zvinoitika mazuva ese). Iyo yakanyorwa data inonyora izere ruzivo rwekufambidzana kusanganisira ekutanga & ekupedzisira mazita, nhare dzenhare, email kero, mazita emakambani, tarisiro mazita, nzvimbo, indasitiri, uye saizi yekambani. Iyo inoratidzawo data rezvinhu rinoratidza zviito zvavakatora.
Mienzaniso yezviito zvakaonekwa zvinosanganisira kutsvagisa kwakawanda, kukwikwidza saiti kukwikwidza, indasitiri kukurudzira kuita, uye mibvunzo ine chekuita nezviitiko zvikuru zveindasitiri. Iyo data zvakare inoputsa zviito nemhando uye zvinokonzeresa. Mune mamwe mazwi, zvinongoratidzira kwete zvakangoitwa netarisiro kana mutengi, asi sei akazviita.
Izvo zvinotokwanisika kumaka dhata inoratidza vatengi varipo, maakaunzi maakaunzi, uye kudzokorora zviitiko zvechinangwa chakaratidzirwa. Zvese izvi zvinoenderana nekuve nerunyorwa rwevanhu chaivo vanotora matanho chaiwo kuti vadzidze zvakawanda pamusoro pemhando yezvigadzirwa nemasevhisi aunotengesawo.
Chinangwa Dhata Seyakanangana uye Kubatana Turu
Kushambadzira nekutengesa zvagara zvine mhando yerudo-ruvengo hukama. Vatengesi zvikwata vanoda vatungamiriri vanokwanisa vakagadzirira kutenga. Zvikwata zvekushambadzira zvinoda kuona kwekutanga kutungamira, kuvabata, nekuvachengeta kusvikira vasvika panguva iyoyo yekugadzirira.
Zvese izvi zvinhu zvinowedzera mhedzisiro uye chinangwa data inobatsira zvese kutengesa nekutengesa zvakanyanya. Inopa chishandiso chakajairika chekubatanidza chinobatanidza kutengesa uye kushambadzira zvakananga, kukurudzira kubatana, kududzira iyo data uye kuronga nzira dzinoshanda dzemhando dzese dzekutaurirana. Heano mimwe mienzaniso yakajairika yekuti dhata yedhisheni inoshandiswa sei pamwe.
Kuwanikwa kwekuwedzera kwekutengesa kutengesa kunotungamira
Kuderedzwa kwe churn uye kukurudzira vatengi kuvimbika
Kubudirira kudyidzana neakawandisa account
Kuiswa kwekutanga kwekucherechedzwa kwechiratidzo uye kuisirwa kwemutengo
Kuteedzera akakodzera maitiro
Imwe yeaya ari pamusoro nzvimbo anofarira kushambadza nekutengesa. Kubudirira mune zvese zvinofambisa kambani kumberi uye inobvumidza inobudirira, inonzwisisika kubatana pakati pezvikwata.
Chinangwa Dhata: Iyo Yemakwikwi Inobatsira
Kushandisa chinangwa data kune zvakawanda zvakanakira. Chimwe chezvakanyanya kukosha kugona kwayo kubatsira vashandi vekutengesa uye vekutengesa kunongedzera vatengi vanoverengeka pasangano rese. Imwe kambani inogona, uye kazhinji inoita, inosanganisira zvinopfuura imwechete yekutengesa musika kana persona pasi peimwe denga. Izvo zvakakosha kune mumwe mukuru kana mutungamiri zvinogona - uye kazhinji zviri - zvakasiyana kubva kune mumwe.
Chinangwa data inobatsira vashambadzi kugadzirisa zvemukati zveumwe neumwe munhu anobatanidzwa mukutenga. Nemazana emasangano anoshandisa zviyero zvakafanana mukutsvaga kwewebhu, chinangwa chedata chinobatsira kudzikisira kugadzirwa kwezvinhu zvakanangwa zvakanyanya pamusoro pekuvaka makwikwi akasimba uye anobudirira ekushambadzira.
Zvinobudirira Leveraging Chinangwa Dhata
Kuva nehukama hwakananga pakati pechinangwa chemutengi uye zvemukati zvemukati zvinopa vashambadzi uye vezvekutengesa nyanzvi pamakwikwi makuru. Kuitira kuti kuwedzere kuunganidzwa uye mhando yedata yedhata yakakosheswa kuti iyo yakaunganidzwa dhata iwirirane nemhando dzakasiyana dzehuwandu, hwenzvimbo, uye data renhoroondo. Pasina izvo kuwirirana, zvinorema (verenga: padhuze nezvisingakwanisike) kuti unzwisise zvizere kuti ndeapi maitiro anoenderana nemamwe profiles evatengi.
Kana kunzwisiswa kwechinangwa cheicho chaicho mutengi munhu yakave yakasimbiswa, zvese kutengesa uye kushambadzira zviri munzvimbo dziri nani kugadzira zvakakosha, zvemukati zvemukati zvinotungamira kuburikidza nhanho yega yeiyo rwendo rwevatengi.
Imwe yedzakareruka nzira dzekuwedzera dhata dhata zvinobudirira kugadzira zvinyorwa zvemukati meblog, zvinyorwa zvewebhu, uye mamwe mafomu ezvinyorwa zvakanyorwa zvinoratidza kunzwisiswa kwakajeka kwemusika wako. Zvemukati zvinofanirwa kugadzirisa matambudziko uye marwadzo mapoinzi pamwe neakawanika kuburikidza neakaunganidzwa dhata data. Kuita zvese izvi zvinomisikidza brand yako sechiremera uye nekutaurirana kugona kuendesa zvine hungwaru, zvakavimbika, zvakavimbika zvemukati.
Izvo zvakare zvinokurudzirwa kwazvo kugovera zvemukati zvemukati nenzira inowedzera kusvika. Izvi zvinosanganisira kugadzira nzira yekuburitsa uye yekubatanidza yakatenderedza zvese zvakanangwa. Muchidimbu, gadzira uye ubudise zvemukati zvinoratidzira tarisiro yechinangwa uye uone kuti inowana nzira yayo pamberi pevateereri vayo.
Iyo inotungamira chizvarwa chirongwa chinoshandisa zvinobudirira uye chinoshandisa chinangwa data inopa mukana wakasarudzika kune chero kutengesa kana kushambadzira chirongwa. Inoisa mhando yako musiyano kubva kunyangwe makwikwi makuru uye inowedzera mikana yekupedzisira kuzivikanwa semutungamiri weindasitiri.
Gadzira yakananga, isina musono yemukati yekushambadzira nzira iyo inoratidzira iwo anonongedzera anonongedzwa netarisiro panguva dzese nzira dzepamhepo zviitiko (tsvagiridzo, kushanya kwenzvimbo, kufambidzana nevanokwikwidza, nezvimwewo). Izvi hazvingobatsire chete kuburitsa zvinotungamira zvirinani, zvakare zvichave nemhedzisiro yakanaka kune yako yepazasi mutsara. Kubatanidza dhata yedhata kunobatsira kuita mushandirapamwe wekushambadza mune ramangwana kuti ubudirire, uchibvumira timu yako yekutengesa kuti itarise zvakanyanya kumaakaundi angangotenge.
Tags: kushambadzira nyika
Jilian Woods mutori venhau anoshanda akazvimirira uye munyori ari kubatsira ane makore anopfuura maviri ekuziva ruzivo. Semunyori, anoona chinangwa chake mukugadzira uye nekugovana zvirimo zvirimo nevanhu vanofarira kudzidza chimwe chinhu chitsva. Kunze kwebasa rake rezuva, unogona kuwana Jilian achizvipira kana kuita yoga.